Sidee Ayuu Ahaa Qaab-ciyaareedka Kai Havertz & Timo Werner Kulankoodii Ugu Horreeyey EPL? – Laacibnet.net
Sidee Ayuu Ahaa Qaab-ciyaareedka Kai Havertz & Timo Werner Kulankoodii Ugu Horreeyey EPL?
Chelsea ayaa guul ku bilaabatay horyaalka Premier League, waxaanay 3-1 ku garaacday Brighton oo ay ugu tagtay Amex Stadium.
Frank Lampard ayaa kulankan kusoo bilaabay laba ka mid ah saxeexyadii badnaa ee uu sameeyey xagaagan, waxaanay ahaayeen Timo Werner oo weerarka hoggaaminayay iyo Kai Havertz oo khadka dhexe kula soo bilowday Mount iyo Loftus-Cheek.
Labadan ciyaartoy ee reer Germany midkoodna masoo taabanin shabaqa ciyaartooda ugu horreysa laakiin waxay sameeyeen fursado goolal noqday iyo ciyaarta oo ay ka ahaayeen xiddigo ka dhex muuqda, waxaana dhamaadkii ciyaarta bandhiggooda qiimayn ku sameeyey tababare Frank Lampard oo warbaahinta la halday.
Lampard oo ugu horreyn ka hadlay Kai Havertz ayaa yidhi: “Waan jeclaaday. May ahayn ciyaar aad timaaddo oo aad tidhaahdo ‘waxa jiray 10 waqti oo muhiim ah’, laakiin waxa jiray waqtiyo uu tayo weyn iyo degganaan ba la yimid. Waxay su’aal weyn ahayd sida degdeg uu ugula qabsanayo, balse wax badan ayaa garbihiisa saaran waanu yar yahay, haddana horyaal cusub ayuu yimid.
“Wuxuu kulanka u ciyaaray si tayo leh iyo sida uu kubadda u helayey. Waxyaabo yar oo indhaha soo jiita ayaynu aragnay. Waxaynu aragnay isaga oo dib ugu soo noqonaya 80 yards si uu ciyaartoyda kale kubadda uga reebo, marka ahy kubaddu ka lunto. Wax kasta oo aan ka arkay marka laga eego ciyaartiisa way fiicnaayeen.”
Tababare Frank Lampard waxa uu iftiimiyey in Kai Havertz uu kulamada xiga lasoo bixi doono tayadiisa dhabta ah, waxaanu yidhi: “Tayadiisu way soo bixi doontaa. Wax badan ayaa caawa la iska weydiinayay, laakiin jalleecooyin baynu aragnay. Wax kasii badan ayaynu ka arki doonaa, sababtoo ah, waa ciyaartoy da’yar oo hibo badan leh.”
Timo Werner waxa uu sabab u ahaa goolkii koowaad ee Chelsea ay dhalisay oo ahaa rikoodhe lagu galay, waxaana kubadda gool u sarrifay Jorginho.
Lampard oo Werner ka hadlay ayaa yidhi: “Waxaan jecelahay sida Timo uu uga soo boodo meelo kala duwan. Maaha kaliya ciyaartoy afka hore ah oo ku dhegsanaada difaacyahannada. Mararka qaarkood gudaha hore ayuu ku bilowdaa waxaanaynu aragnaa orodkiisa (waqtigii rikoodhaha). Waxa dhab ahaantii ka muuqata hammuun uu gool-dhalinta u qabo. Waxay ila tahay inaynu aragnay calaamado badan oo muujinaya waxa uu la iman doono.”
Qiimayntii ciyaartoyda Chelsea
Reece James oo gool dhaliyey, mid kalena caawiye ka ahaa ayaa noqday xiddigii ugu wanaagsanaa garoonka, waxaanu difaacan midig muujiyey sida uu muhiimka ugu yahay Lampard ee ay tahay in boos joogto ah loo siiyo.
Qiimaynta oo dhamaystiran:
Beddelka: Barkley (5), Hudson-Odoi (5), Azpilicueta (n/a).